भाग्य बदलिन छोरी नै जन्मिनु पर्छ……..एकपटक अवस्य पढ्नुहोला ! – List Khabar
Home / समाचार / भाग्य बदलिन छोरी नै जन्मिनु पर्छ……..एकपटक अवस्य पढ्नुहोला !
admin February 5, 2022 समाचार Leaveacomment 90 Views
यस अध्ययनमा पुरुषको छोरा भयो भने उमेरले असर गर्दैन तर छोरी जन्मेमा बाबुको उमेर ७४ हप्ताभन्दा बढी बढ्ने गरेको पाइएको छ । जति धेरै छोरीहरु बाबुबाट जन्मिन्छन्, त्यति नै उमेर बढ्दै जान्छ । युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले बालबालिकाका बुबाको स्वास्थ्य र उमेरमा पर्ने असर पत्ता लगाउन ४३१० जनाको तथ्यांक संकलन गरेका थिए ।
जसमा 2147 आमा र 2163 बुबा थिए। अनुसन्धानकर्ताहरूले यो आफ्नो प्रकारको पहिलो अनुसन्धान भएको दाबी गरेका छन् । यसअघि सन्तानको जन्ममा आमाको स्वास्थ्य र उमेरबारे मात्रै अनुसन्धान हुने गरेको छ । युनिभर्सिटीका एक अनुसन्धानकर्ताका अनुसार छोरीको सट्टा छोरालाई प्राथमिकता दिने बुबा आफैंले आफ्नो जीवनको केही वर्ष घटाउँछन् ।
यसअघि पनि अर्को अनुसन्धानमा यो कुरा प्रमाणित भएको थियो कि अविवाहित महिला विवाहित महिलाको तुलनामा बढी खुसी र जीवन्त हुन्छन् ।वैसे, अर्को अनुसन्धानमा यो पनि भनिएको छ कि बच्चाको जन्म पछि आमा र बुबा दुबैको उमेर उनीहरूको उमेर भन्दा दुई देखि चार वर्ष बढी हुन्छ।
यस अनुसन्धानमा १४ वर्षसम्मको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । जसबाट सन्तानबिना बस्ने आमाबाबुको तुलनामा आफ्ना सन्तानसँग बस्ने अभिभावक बढी खुसी र लामो समय बाँच्ने गरेको पाइएको छ ।
Previous यस्तो रह्यो यस सातामा सुनचाँदीको मूल्य कस्तो रह्यो, जानौ
Next १८ वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक फेसबुकका दैनिक सक्रिय प्रयोगकर्ता घटे यस्तो कारण